शललाई कसरी निस्कन्छ?
घर आफ्नै हातमा
सायद, एक चिसो सर्दाइको रातमा न्यानो शलमा लिपिनुको साथै केहि सुखद छैन र पुस्तक पढ्न र तपाईंको मनपर्ने टिभी श्रृंखला हेर्न मनपर्छ। र यदि यो शल आफ्नो हातले बनाएको छ भने, यो कंधेहरूमा फेंक गर्न दुग्धी हुनेछ। यस मास्टर वर्गमा हामी तपाईंलाई सुइने सुईको साथ शल बाँध्न कसरी बताउछौं, जुन मूल र उत्तम सर्दिया सहायक हुनेछ।
यस पाठमा, शल "हरिनी" को एक राम्रो तरिकाले प्रसिद्ध मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ, जसको लेखक डिजाइनर एमिली रोस हो। ढाँचा कुखुरा को मुख्य भाग मा थोडा परिमार्जित शास्त्रीय "फेर्न" मोनिफ को प्रतिनिधित्व गर्दछ, सजिलै संग शल को झुकाव वाला पत्थर को आभूषण मा बदलिन्छ। यो शटललाई सुई संग सुन्न हाम्रो मास्टर क्लासले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ।
ओपनवर्क शल सिर्जना गर्न तपाईलाई आवश्यक पर्दछ:
अनुहारको 400 जी वा राम्रो धागा;
3.5 -4मिमी आकार को परिपत्र बुनाई सुइयों (ध्यान दें कि मोटे को प्रवक्ता, यार्न को अधिक भन्दा खपत);
हुक (यो कामको अन्त्यमा लूप्स बन्द गर्न आवश्यक हुनेछ);
अब हामी थप विवरणको बारेमा बताउछ कि सुई बुनाईको साथ यो सजिलो सरल शलले कसरी जडान गर्दछ:
कुनै पनि अदृश्य डायलसँग3loops डायल गर्नुहोस्।
पहिलो पाश बन्द, र बाँकी दुई अगाडि बाधा गर्दै छन्। यो श्रृंखला5थप पटक दोहोर्याउनुहोस्। यस तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ स्वतन्त्र रूपमा पाच हटाउन आवश्यक छ।
Workpiece लाई घुमाउनुहोस्। किनारा र3अदृश्य व्यक्तिहरूसँग3थप लूप्स टाइप गर्नुहोस्। कुलमा, त्यहाँ9loops प्रवक्तामा हुनुपर्छ। लूप्सको पहिलो र अन्तिम ट्रिगरहरू गेटिस्ट सिचसँग जोडिएका छन् र एक पछिल्लो किनाराको रूपमा बनाइन्छ।
पङ्क्तिको केन्द्र पाशमा मार्करलाई स्थिति दिनुहोस्।
"ए" योजना प्रयोग गरेर आफ्नो हातले शललाई निस्कनुहोस्। आरेखले शल को मात्र आधा देखाउँछ।
जब आवश्यक पङ्क्तिहरू सम्बन्धित छन्, "B" योजनामा ​​जानुहोस्। यसले पनि उत्पादनको आधा मात्र देखाउँछ।
अन्तिम पङ्क्ति बाँध्नु पछि, तपाईं लूप्स बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि, क्रूसमा4अनुहार लुपुहरू सँगसँगै। त्यसपछि,6हावा चप्पल डायल गर्नुहोस्, र अर्को3फेब्रुअरी अगाडि अगाडि जोड्नुहोस्। त्यस पछि, पहिलो पाश बन्द गर्नुहोस्: अन्तिम एक बुटमा टाँसिएको छ। त्यसपछि फेरि,6हावा लूप्स डायल गर्नुहोस् र माथिका कार्यहरू आवश्यक सङ्ख्या दोहोर्याउनुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले केवल4छोटो जगेडालाई साथसाथै एकैचोटि र अन्तमा किनारा चप्पल बन्द गर्नुपर्दछ।
अब सुई बुनाई संग बाँडिएको शल लक हुनुपर्छ। यो गर्न, गीले यसलाई र क्षैतिज सतहमा खिच्नुहोस्, पिनका साथ सबै परिमितिहरू पिसाब गर्दछ।
शल हरुनी तयार छ!
प्लास्टिक क्यानभासमा कढाई
सूटकेसका लागि केस
Piñata आफ्नै हातमा
भारतीय हातमा आफ्नै हातले
डिशको उल्टो decoupage
चुरोट पोशाक तपाईका हातहरूसँग
बच्चाहरुका हातहरुका लागि महसुस देखिने मिसिन
मोडुलर origami सांप
आफ्नै हातले स्नानको लागि बम
समुद्री भोजन को शीर्ष
कसरी डेनिम शर्टहरू सजावट गर्ने?
गुप्त घर आफ्नै हातले
Kurantil - प्रयोगको लागि संकेत
बिरालोको दाँत थियो
मोचको साथ केक
लेमन mie संग meringue
प्रिन्स विलियम र केट माइडिलेसनले अमेरिकाको कप वर्ल्ड सीरीज भ्रमण गर्यो
हब छनौट गर्ने?
क्रिस टायजनले अल्कोहल निर्भरता विरुद्धको लडाइँबारे कुरा गरे: "मैले धेरै पिउन थालेँ"
एक रस कुकरमा एप्पलको रस
कुल प्रदर्शन: अभिनेता र सेट मा उनको ब्याकअप
आमाबाबु र छोराछोरीबीचको विवाद किन उठ्छ?
20 परिचित प्रतीकहरू, जसको अर्थ तपाईंले अनुमान गर्नुभएन
जेसिका बिइलले जस्टिन टिम्बरलेकसँग आदम स्यान्डलर र "हट रात" लाई प्रेम गरेको बताए
26 सेलिब्रेटीहरूको तस्बिर पिन-अपको शैलीमा
फाउन्टेनको लागि पम्प
वजन कम गर्न गोभी
मूली को बारे मा उपयोगी छ?
सारा संसारलाई गोप्य रूपमा: जेसिका बिइल फर्केर फर्किएको छ!
14 फोटोहरूले तपाईंलाई भूतमा विश्वास गर्नेछ
प्रारम्भिक अवधि मा एक अक्टोपिक गर्भावस्था को लक्षण
घर मा बच्चाहरु को लागि दिलचस्प र रोमांचक सुरक्षित प्रयोग